Shiinaha Carruurta Roob-wadaha oo leh Hood USD1.1-USD2.3 Soo-saare iyo Badeecad | Weligaaba
Nakhshadeynta ugu dambeysa ee Kartoonka roobka ee kartoonka leh dabool. Iyada oo leh xirmo laastik ah iyo daabacaad qurux badan, sababtoo ah qiimaha dhaqaalaha iyo daabacaadda jilicsan. Aad bay caan u tahay.
Nooca: koodhadhka roobka
Magaca alaabta: Koodhadh biyo diid ah
Waxqabadka banaanka: Xero, Socdaal
Saraawiil / Saraawiil Roob-celis / Roob Cape: RAINWEAR
Qaabka Poncho: Roob kali keli ah
Jinsiga: caalami ah
Kooxda Da'da: Carruurta
Magaca Brand: FB
Lambarka Moodalka: FB2028
Midabka: Midab casaan, casaan, buluug, casaan ama la habeeyay
Dhumucdiisuna: 0.12mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm
Miisaanka: Qiyaastii 180g-220g
Calaamadda: Daabacaadda Logo Custom
Xirxirida: 1pcs / opp Bag
Xirxirida & rarka
1bag / gabal
Miisaanka Halbeegga: Qiyaastii.180g-220g
Cabbirka kartoonka: 37 * 26 * 25cm
Halkii Kartoon: 50pieces
Miisaanka kartoonka: Qiyaastii 12kg
Waqtiga Lead: Qiyaastii 30 maalmood kadib helitaanka deebaajiga
Bixinta & Bixinta: Habka Bixinta: T / T, Western Union, Paypal, L / C.
Faahfaahinta Bixinta: 30-50 maalmood gudahood kadib marka la xaqiijiyo amarka
Faa'iidooyinka Tartanka Aasaasiga ah
Amarada yaryar ayaa la aqbalay Qiimaha
Adeeg Gaarsiin ah
Tusaalooyinka Ansixinta Tayada ee La Heli Karo
Joogtaynta sumcadda loo habeeyay
Hore: Meelaha la tuuro ee roobka degdegga ah ee loo yaqaan 'poncho USD0.12-USD0.3
Xiga: Roob banaanka qurxoon poncho loogu talagalay carruurta USD1.1-USD1.8
S: Miyaad aqbashaa OEM & ODM?
J: Haa, waanu soo dhawaynaynaa OEM & ODM
S: Waa maxay habka lacag-bixintaadu?
A: Waxaan aqbalnaa TT, Paypal, L / C oo aan laga hortagi karin marka la arko, Western Union
S: Miyaan heli karaa shay-baarka qaarkood si aan u hubiyo tayada?
J: Haa, waan ku faraxsanahay inaan kuu soo bandhigno shaybaar waxaanan ku bixinaa adeegga muunad qaadashada iyadoo la raacayo shuruudahaaga. Muunadku waxay noqon kartaa bilaash ama lagu soo oogi iyadoo ku xiran kiisaska gaarka ah. Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay bixiyaan khidmadaha xamuulka ee shaybaarka.
S: Maxay tahay dekeddaada guud ee rarku?
S: Waa maxay waqtiga hogaamintu?
J: Waqtiga leedhka wuu ku kala duwan yahay waxayna kuxirantahay nooca alaabada iyo tirada dalabka.
S: Sideed u maareysaa xakamaynta tayada?
J: Tayada ayaa ahmiyadeena koowaad. Waxaan ahmiyad weyn siineynaa xakameynta tayada bilow ilaa dhamaad. Waxaan haynaa dukumiintiyo QC aad u faahfaahsan oo ku saabsan shay kasta oo kooxdeena QC ah waxay si buuxda u baarayaan shixnad kasta.
S Service Adeegga Shixnad
J: Waxaan kuu diyaarin karnaa gaadiidka badda / hawada / dirista iyo isku-darka kuwa wax iibiya ee adiga kuu ah.
Carruurta PCV Raincoats
Koodhka Roobka PCV Ee Haweenka
Suudka Roobka PCV
Dharka roobka ee PCV
Wasakh culus culus oo dahaaran PVC poncho poncho for ...
Kartoo midab jilicsan 100% Polyur biyuhu ...
Polyester Rain qalooca poncho leh dabool USD5.3 ...
Loo Isticmaali karo PEVA Roob Ponchos oo leh Logo Custom ...
Carruurta Pu Raincoat, Peva Raincoat, PCC Raincoat, PCV Poncho, Pu Raincoat, Haweenka Koodhka Roobka,